OTU ESI ABANYE BIOS NA LAPTỌỌPỤ SAMSUNG - BIOS - 2019
Otu esi abanye BIOS na laptọọpụ Samsung
Na Photoshop kachasị amasị anyị, enwere ike ịmegharị ihe oyiyi. Nke a bụ njedebe, na ntụgharị, na mgbagwoju anya, na nkwarụ, na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ.
Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi agbatị ihe oyiyi ahụ na Photoshop site na njedebe.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịgbanwe ọ bụghị nha, ma mkpebi nke onyinyo ahụ, anyị na-atụ aro ka ị na-amụ ihe a ebe a:
Ihe omumu: gbanwee mkpebi nke onyinyo ahu na Photoshop
Nke mbụ, ka anyị kwuo banyere nhọrọ maka ịkpọ ọrụ ahụ "Ịchacha"Nke anyị ga-eme ihe na oyiyi ahụ.
Nhọrọ mbụ iji kpọọ ọrụ bụ site na menu ihe omume. Achọrọ ịga menu Na-edezi ma kpoo ihe "Gbanwee". N'ebe ahụ, na menu ndọpụta ma enwe ọrụ anyị chọrọ.
Mgbe arụ ọrụ ahụ, a etiti kwesịrị ịpụta na oyiyi ahụ na akara na nkuku na n'etiti akụkụ.
Ikwupụta ihe akara ndị a, ị nwere ike ịgbanwe foto ahụ.
Ụdị nke abụọ nke ọrụ oku "Ịchacha" bụ iji igodo ọkụ CTRL + T. Njikọ a na-enye ohere ọ bụghị naanị ịdị elu, kamakwa iji gbanwee onyinyo ahụ ma gbanwee ya. N'ikwu okwu n'ụzọ doro anya, a naghị akpọ ọrụ ahụ "Ịchacha"ma "Na-agbanwe agbanwe agbanwe".
Anyị emeso ụzọ isi akpọ ọrụ, ugbu a ka anyị ga-eme.
Mgbe ị na-akpọ ọrụ ịkwesịrị ịkwaga cursor na akara ahụ ma dọpụta ya na nri ziri ezi. N'ọnọdụ anyị, n'elu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, apụl arịbaala, ma gbagọrọ agbagọ, ya bụ, ọnụ ọgụgụ nke ihe anyị (nhata nke obosara na ịdị elu) agbanweela.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka echekwa ya, mgbe ị na-agbatị gị, ị ghaghị ijide igodo ahụ. SHIFT.
Ọrụ ahụ na-enyekwa gị ohere ịtọ ọnụ ahịa nke nha a chọrọ n'ọkara. Ọnọdụ ahụ dị n'elu osisi.
Iji chekwaa ikike, ọ bụ iji tinye otu ụkpụrụ ahụ n'ubi, ma ọ bụ rụọ ọrụ bọtịnụ na agbụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụrụ na a na-arụ ọrụ bọtịnụ ahụ, otu uru anyị bara n'ime nke mbụ abanyela na mpaghara dị nso.
Ntucha ihe nke ihe bụ nkà ahụ, na-enweghị nke ị ga-abụ ezigbo onye nlekọta Photoshop, ya mere ụgbọ okporo ígwè na ezigbo ihu ọma!